Technorati Mamelombelona ny Pejy Fitaovana ... miaraka amin'ireo Fitaovana Mangatsiaka! | Martech Zone
Dorion Carroll vao nanoratra ahy avy Technorati ary izy ireo dia 'namerina namerina' indray ny pejin'ny Tools Blogger miaraka amina fanombohana malefaka fitaovana vaovao fanaovana bilaogy Technorati. Fantatrareo lahy fa voanjo Technorati aho!
Ny pejy dia nalahatra tsara kokoa ary misy ny fanombohana fitaovana vaovao vitsivitsy, ao anatin'izany ny Technorati Authority Plugin. Nanova ny tranokalako aho ary ho afaka minitra vitsivitsy miaraka aminy! (Eo ambanin'ny Plugin misy ahy eo amin'ny Sidebar).
Nanoratra ny Plugin Technorati Rank ho an'ny WordPress herinandro vitsivitsy lasa izay. Nampiasa teknolojia vitsivitsy aho mba hanamorana ny fanoratana ilay plugin (cURL, PHP5, SimpleXML, WP-Cache, sns.) Ka nahazo tsindry kely aho izay tsy mety amin'ny mpampiantrano maro.
Raha hifindra any amin'ny mpampiantrano tsara ianareo, dia tsy tokony hatahotra izany ianareo! 😉
Afaka mahazo ny mpamaky ny tranokalako 12 volana fampiantranoana MAIMAIMPOANA! Tsindrio ny faran'ny my About page mandritra ny 12 volana maimaim-poana miaraka amin'ny mpampiantrano ahy.
Vakio ny Fahano ary mahazoa Hosting mandritra ny 12 volana maimaim-poana
Apr 2, 2007 amin'ny 4: 16 AM
Miarahaba anao nahatratra ny 3000 voalohany tao Technorati:
Laharana: 2,987 1,465 (rohy 732 avy amin'ny bilaogy XNUMX)
Mendrika tsara, ry bilaogiko
Apr 2, 2007 amin'ny 11: 25 AM
Misaotra! Tsy ho vitako izany raha tsy teo ianareo rehetra. Mila tanjona vaovao aho, ny tanjoko dia 5,000 tamin'ity taona ity. Tsy tsapako fa rehefa mitombo ny fanekena anao dia mitombo haingana kokoa ny laharanao rehefa miakatra ianao. Ataoko angamba fa rehefa tafiditra ao amin'ny 500 voalohany ianao dia manomboka miadana indray.
Aleo isika samy hahalala!
Apr 2, 2007 ao amin'ny 8: PM PM
WoW .. ambanin'ny 800 izao ?? adala manaitra !!!!
Maniry aho! Io no isan'ny bilaogy mampifandray. Io ilay antsoin'i Technorati ho 'laharam-pahefana' ananany.
May 5, 2007 amin'ny 1: 44 AM
Tonga tamin'ity tranonkala ity aho noho ny plugin Technorati anao ary liana tamin'ny fanehoan-kevitra napetraka. Ka nanapa-kevitra ny hisoratra anarana aho ary hijery izay alehany. Misaotra izao…
May 5, 2007 amin'ny 8: 30 AM
Eny Dave, manantena aho fa hifikitra eo! Ampahafantaro ahy raha misy lohahevitra tianao soratako.
Misaotra nampahafantatra ahy fa eto ianao! 🙂
Jun 24, 2007 ao amin'ny 6: 04 PM
Misaotra betsaka amin'ny plugin. Hataoko miasa io andro io.